Mareykanka Oo Faafiyay Aqoonsiga Askarigii looga Dilay Duleedka Kismaayo. – Shabakadda Amiirnuur
Mareykanka Oo Faafiyay Aqoonsiga Askarigii looga Dilay Duleedka Kismaayo.
June 10, 2018 7:34 am by admin Views: 92
Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa soo bandhigtay aqoonsiga gaarka ah ee sarkaal katirsanaa ciidamada Kummaandooska oo maalin ka hor looga dilay Soomaaliya.
Meydka sarkaalka iy afar askari oo dhaawac ah ayaa lageeyay qeybta caafimaadka safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi dalka Kenya.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in askariga ladilay lagu magacaabi jiray Staff Sgt. Alexander Conrad, 26, waxaana lagu dilay weerar ay ciidamada Al Shabaab ka geysteen deegaanka Sanguuni ee duleedka Kismaayo 8,May,2018.
Taliska ciidanka Mareykanka qaaradda Africa ee AFRICOM ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in ciidamadoodu la kulmeen weerar toos ah iyagoo garab siinaya maleeshiyaadka maamulka ‘Jubbaland’ isku magacaabay.
Weerarka ayaa dhacay saacaddu markii ay ku beegneed 2:45 p.m. maalintii Jimcaha, Sheekh Cabdi Caziiz Abuu Muscab Afhayeenka ciidanka Shabaabul Mujaahidiin ayaa xaqiijiyay in 5 askari oo American ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weerar ay ciidamadoodu ka fuliyeen tuulada Baar Sanguuni.